कृष्ण शर्मा सुमु, सिलिगुडी, हाल- राँची,झारखण्ड
फुत् अक्षेता फ्याकेर निकैबेर सोचे पछि फेरि नाडी समातेर फेरि अक्षेता टिपेर निकैबेर आफ्नु भाषामा फलाके पछि अक्षेता फालेर रातो आँखाले हेरे पछि निकै गम्भीर भावमा भने घरमा सबै कुरा बिग्रेको छ ।
हरिहर लु भनु काले दाजु अब के गरौं त ?
हेर हरिहर अब तिमी मात्र बिमारी भएको भए केही थिएन तिम्रो घरमा कालो छायाको बाँस बसेको छ । घरलाई बान्नु पर्छ । नभा अझै बिमारी गम्भीर हुन्छ जति सक्दो कालो भाले मनसाउनु पर्छ ।
हरिहर दोधारमा पर्छ । छेउमा बसेको श्रीमती राधा सित अनुहार मिलाउछ । श्रीमतीले आँखाको चालमा ल ल भनिदिए पछि हरिहरले हुन्छ दाजु भनिदियो । दाजु कहिले तकमा गर्नु पर्ने ? यही सप्ताह भित्र गर्नु पर्छ भाइ सके शुक्रबार ।
एउटा लिस्ट हरिहरलाई दिन्छ भाइ यहाँ सबै कुरा लेखिएको छ, माइलाको दोकानमा सबै पाउछ । अँ साच्चै भाले चै खोजिहाल्नु कालो नभए पनि अलिअलि कालो देख्ने भए पनि चल्छ । लु म लागे । ‘मामा चिया त खाएर जानू’ छेउमा बसेको हरिहरको ठूलो छोरी बोल्छे ।
छोडिदेउ नानी अब खाना खाने बेलामा के को चिया भन्दै काले उकालो लाग्छ ।
भालेको खोजि जोडतोडले भयो । आखिरमा माथिल्लो गाउँमा रातो रातो कालो कालो भाले छ अरे भनेको खबर पाए पछि हरिहरले राधालाई लिनु पठाउछ । भाले पाएपछि दोकानबाट नि सर समान लिएर आउनु पैसा कति हुन्छ खातामा लेख्नु लगाउनु भनी राख्छ ।
हरिहरको घरमा चिन्ता बस्छ रे भने कुरा गाउँ भरि फैलिनु थाल्छ । यसरी सर समान सबै जुटाए पछि धामी काले दाजुलाई खबर पठाउछ ।
शुक्रबार चिन्ता बेलुका सात बजे देखि शुरु गर्ने खबर लिए पछि हरिहरको कान्छा छोरा घर आईपुग्छ ।
दान, धुप, मिठाई आदि सामाग्री नाङ्गलोमा ठिक परेर राधा एकोहोरो समानलाई हेर्छे, कतै केही छुटेको त छैन मन मन नै सोच्छे ।
करिब साँढे छ : बजे तिर माला, ढ्याङग्रो लिएर काले दाजु हल्ला गर्दै ओरालो झर्छ । गाउँका सबै मानिसहरु हरिहरको घरमा भेला हुन्छन् ।
चिन्ता शुरु भयो । सानू लाठीले बिस्तारै बिस्तारो रामु काकाले थाल बजाउनु थाल्छन् । धामी कामनु थाले पछि रामु काकाले झर्का थाललाई अझै जोड जोडले बजाउनु थाल्छन् । झर्का थाल तापक्रम अनि घर्षणको कारण थाल फुटछ । काले दाजु झन जोडले कामनु थाल्छन् लु यो घरमा बोक्सी आएको छ वाण हान्यो भन्दै सबैको अनुहार निहालेर हेर्नू थाल्छन् । गाउँका सबैले आफ्नु अनुहार लुकाउने चेष्टा गर्छन् । तर, कसैको नाम नलिई ढ्याङग्रो बजाउनु थाले।यसरी नाना थरीको पुजा आजा गरे पछि अन्तमा अब भालेको पूजा हुने खबर काले दाजुले दिन्छन् ।
हतार हतार रामु काका डोकोतिर लम्कन्छन् । डोको के उघार्नु आँटेको थिए भाले उडेर भाग्छ । यो खबर कालू धामी सम्म आई पुग्यो । धामी कामनु छोडेर भालेको खोजिमा लाग्छन् ।
यसरी भाले खोज्दा खोज्दै बिहानको तीन बज्यो भाले पत्तो लागेन । आखिरमा माटोको प्रतीक बनाएर मनसाउने काम भयो।भोलि आएर बाँकी काम गर्छु भन्दै काले धामी झोला झ्याम्टा लिएर उकालो लागे ।
राती भरि सुत्नु नपाएकोले हरिहरलाई अझै बिमारले च्यापेर लग्यो । गाउँका मानिसहरु भेला भए । डाक्टरकोमा लाने सल्लाह राधालाई दिए । गाउँबाट साप्टी मागेर हरिहरलाई डाक्टरकोमा पुराए ।
डाक्टरले रगत जाँच गरे पछि कालो ज्वरोले समातेको बताए । औषधि तीन खुराक खाएपछि हरिहरको अनुहार अलिक उज्यालो भयो ।
यता घरतिर काले दाजु र रामु काका भने भाले खोज्नुमा नि तलिन थिए । राती डेङ्ग्रो र मानिसको हल्लाले गर्दा भालेले नौ डाँडा काटी सकेको थियो । ‘थुक्क् रामु एउटा भाले समात्ने पनि हुति छैन’ भन्दै कालू दाजु रिसाई रहेको थिए । रामु काका भने आफ्नु सफाई दिँदै भन्दै थिए, ‘कालू दाजु अब मैले पनि छोडछु भनेर त किन मसला पिस्थे होला र ?’
‘अब खा यत्रो भाग’ भन्दै कालू दाजु उकालो लागे ।
यसरी कालो भाले भागेकोमा रामु काकालाई मनमा थकथकी भईरहेको थियो ।।,